April 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
EYE4SOFTWARE GPS MAPPING V5.0.12.1214
Maung Pauk at 4:54:00 PM 0
EYE4SOFTWARE GPS MAPPING က လက်ရှိ Update GPS မြေပုံတွေကိုဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီမြေပုံတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရသူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ. ဘယ်လိုသုံးရလဲတော့မသိဘူး.. Geo သမားတွေ၊ Survey သမားတွေ၊ မြေပုံနဲ့အလုပ်လုပ်နေရာသူတွေ အဆင်ပြေပါမှာပါ...
Add comments, symbols, tracks, waypoints or routes to your maps;
Transfer GPS data like tracks, waypoints and routes, from or to your Garmin GPS device;
View GIS features of vector data;
View maps containing elevation or depth data;
Edit waypoints, tracks and routes;
Show your current position onamap;
Convert GPS data between different file formats;
Convert vector maps to AutoCAD DXF, Keyhole Markup Language, ESRI Shape, GeoRSS,
GeoJSON, ARC Generate or Atlas BNA format;
Convert vector maps from one map projection to another.
Perform realtime positioning on vessels, cars, trucks and construction vehicles;
Record your current position and movements, for instance to get hold of the covered area or track.
Load previously recorded track-and-trace data for further analysis
Setup Download Links: 18 MB
Downloader Torrent Downloader ဆော့ဖ်ဝဲများ
µTorrent 3.2 Build 27886 Full
µTorrent ဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... µTorrent မှာ တင်ထားတာတွေကို µTorrent နဲ့ပဲဒေါင်းလို့ရပါတယ်. ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးကြီးတွေကို µTorrent နဲ့ပဲ တင်ထားကြတာတွေ့မိကြပါလိမ့်မယ်.
အဆင့်၁. utorrent.exe ကို Install လုပ်ပါ.
အဆင့်(၂) Install လုပ်ပြီးသွားရင် Program ကိုပိတ်ပါ..
အဆင့်(၃) Taskbar ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ uTorrent ကို Right Click ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပါ..
အဆင့်(၄). Patch.exe ကို Run ပြီး Apply Patch ကိုနှိပ်ပါ...
Download Links: 0.81 MB
LG LG Rooting Rooting နည်းလမ်းများ
LG Optimus L5 E610/E612/E615/E617 Root လုပ်နည်း
Maung Pauk at 4:32:00 PM 0
1). အားအပြည့်သွင်းထားသော LG Optimus L5 E610/E612/E615/E617.
2). My Root Package (အောက်မှာပေးထားပါတယ်)
1). File Manager မပါရင် “ASTRO FILE MANAGER” ကို သွင်းလိုက်ပါ။
2.“System Settings” >> “Developer Options” >> “Enable USB Debugging”.
3). “System Settings” >> “Security”” >> “Enable Unknown Sources”.
4). root package ထံမှာပါတဲ့ “IS11LG_SystemBackupTest.signed.apk” ကို သွင်းပါ။
5). sd ကဒ်ထဲ ထည့်ထားရင် file manager ထဲ ကနေသွာသွင်းလိုက်ပါ.
6).ပြီးရင် “Charge Only Mode”မှပြန်ထားပါ ။
7). သွင်းပြီး ရင် အဲ့ application ကိုဖွင့်လိုက်ပါ “Hello World”လို့ တက်လာပါမယ် ။အဲ့ ဒါ ဆို ဖုန်း ကို restart ချလိုက်ပါ ။
8). အားလုံးပြန်တက် လာရင် ကြိုးထိုးလိုက်ပါ ။ပြီးရင် ဒေါင်းထားတဲ့ folder ထဲက “root.bat”ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ။ပြီးရင် enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ ။
9).reboot ကျသွားပါမယ်။တက် လာ ရင် Root ဖြစ်ပါပြီ ......
My Toot Package.7z
Maung Pauk at 11:41:00 AM 0
ဒါတော့ နည်းနည်း တရားလွန်တယ်မထင်နဲ့နှော်.. ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး... ဘာသာပြန်ထားရုံသက်သက်ပါ... ဒီပို့စ်တင်ချိန်မှာ Glaxy S4 မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရောင်းသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်..တစ်ချို့လက်ထဲမှာလည်း ရောက်နေပါပြီ... ၀ယ်လာခဲ့သူရှိရင် ဖောက်ပေးလို့ရတာပေါ့.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ ရရ.. ရတဲ့အခါ ဖေါက်လို့ရတာပေါ့နှော..
လိုအပ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Driver ကို အရင်ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ထားပါ...
Download Driver သို့မဟုတ်.. Download Driver
ပြီးရင် အောက်ကလင့် တစ်ခုခုကနေ Root ဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ...
Dev-Host Solidfiles Mediafire
1. ဖုန်းမှာ USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို On ထားပါ..
2. ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်လိုက်ပါ...
3. Windows OS မှာတော့ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ထဲက Folder ကို ဖြည်ထုတ်လိုက်ပြီး Run.bat ကိုနှိပ်ပါ...
4. Linux နဲ့ OS X မှာတော့ Terminal နဲ့ Execute ကနေ "./run.sh" Command ကို သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်...
Root လုပ်နေစဉ်မှာ Restart ခဏခဏ ကျနေမှာဖြစ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်းကြည့်နေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်...
Source : xada-developer
Maung Pauk at 11:21:00 AM 0
Knowledge Mobile Specification Phone Application
Specifications Samsung I930 Ativ Odyssey
Dimensions: 122.4 x 63.8 x 10.9 mm
Screen: 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~ 233 ppi pixel density)
display Color: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
Hp Color: Gray
Connection: GPRS, EDGE, EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, HSPA, Wi-Fi 802.11a/ ​​b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0 with A2DP, microUSB v2.0
OS : Microsoft's Windows Phone 8
Main camera:5MP, 2592? 1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo- tagging, Video 1080p @ 30fps
2nd Camera: Yes, 1.2 MP, 720p @ 30fps
- MP3 / WMA / eAAC + player
Battery Type: Li-Ion 2100 mAh battery
Linux ကို Server အဖြစ် ဘာကြောင့် ထားသင့်သနည်း
Maung Pauk at 7:21:00 PM 1
credit to ITgroup
Maung Pauk at 6:37:00 PM 2
ningtunaung: ကိုပေါက်ရေ ... ကျွန်တော်ကို wifi password ပြန်ကြည့်နည်းလေးသိရင်ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းကသူ hangset ထဲမှာသူများရိုက်ပေးထားတဲ့ wifi password ရှိတယ် အဲဒါမကြည့်တတ်လို့။
ningtunaung မေးလို့ ကျွန်တော် လိုက်လေ့လာကြည့်တော့ App သုံးပြီးကြည့်လို့ရတယ်..
သုံးရမယ့် App ကို အောက်ကလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... တစ်မျိုးသုံးရင် ရပါပြီ...
2. ပြီးရင် Root Browser Lite Icon ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ...
3. Data/misc/wifi folder ရောက်အောင်နှိပ်ပါ..
4. Data/misc/wifi folder အောက်မှာ wpa_supplicant.conf ဖိုင်ကို ရှာပြီး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ...
5. RB Text Editor ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Notepad နဲ့ ကျလာပါမယ်...
6. SSID = ရဲ့ဘေးကဟာက နာမည်
psk = ရဲ့ ဘေးကဟာက Password ပါ....
Root Explorer ကိုသုံးပြီးကြည့်ခြင်း
1. ပေးထားတဲ့လင့်က Root Explorer ကို ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ...
2. ပြီးရင် Root Explorer ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ... Super User တောင်းရင် Deny ပေးလိုက်ပါ... Root ဖောက်ပြီးသားဆိုရင်ပေါ့... မဖောက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Grant ကိုပေးလိုက်ရင် Root တောင်ပေါက်ပါတယ်.. တစ်ချို့ ဖုန်းတွေမှာပြောတာပါ...
4. Data/misc/wifi folder အောက်မှာ wpa_supplicant.conf ဖိုင်ကို ရှာပြီး တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ.. Notepad နဲ့ ကျလာပါမယ်...
5. SSID = ရဲ့ဘေးကဟာက နာမည်
မေးလာနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေအတွက် ကြိုတင်အဖြေများ..
မေး . ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ Data မတွေ့ပါဘူး... ပြီးတော့ Wifi ဆိုတာလည်း မတွေ့ဘူးခင်ဗျ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...
ဖြေ . မသိပါခင်ဗျာ...
မေး . root မဖောက်ဘဲ သုံးလို့ရလား...
ဖြေ . မရပါ.. Root Explorer နဲ့ တစ်ချို့ ဖုန်း တော်တော်များများ Root ပေါက်ပါတယ်...
မေး . ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ wpa_supplicant.conf မတွေ့ဘူးခင်ဗျ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...
ဖြေ . ဒါလည်း ကျွန်တော် မသိဘူးခင်ဗျ... ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရှိပါတယ်...
e-books Engineering စာအုပ်
Maung Pauk at 2:26:00 PM 0
ရာစုသစ် အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် မြန်မာလိုစာအုပ်ကို ဝင်းထက်ဝင်းရေးသားထားတာပါ... Electronic အကြောင်း အခြခံကျကျ ရေးသားထားပြီး အဆင့်မြင့်လေ့လာလိုလိုသူများအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်... ဒီခေတ်ကာလဟာ Electronic ကို လုံးဝပစ်ပယ်ထားလို့မရတဲ့အတွက် Electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ Service သမားတွေ လေ့လာဖို့ ကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်...
Downloader Other Downloader ဆော့ဖ်ဝဲများ
Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Video ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ရာမှာ အကောင်းဆုံး Bigasoft Facebook Downloader v1.2.26.4849 Full
Maung Pauk at 2:12:00 PM 0
Bigasoft Facebook Downloader ဟာ Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Video File တွေကို Resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ အမြန်ဆုံး Download လုပ်ပေနိုင်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် Download မလုပ်ခင် ဘယ်ဖိုင်အမျိုးအစားကို ပြောင်းပြီးဒေါင်းမလဲဆိုတာကို Automatically Convert to ဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ခါတည်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးအမျိုးကို ပြောင်းလဲပြီး Download လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်... CD, DVD Format တွေအပြင် iPad, iPhone, BlackBerry, Apple TV, Zune, PSP, PS3, Pocket PC, Creative Zen, Xbox, Archos တွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Format တွေကိုပါ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်... Download လုပ်ရတာလည်း လွယ်လွယ်လေးပါ...
ကိုဒေါင်းရမယ့် Facebook ပေါ်က Video Link ကို Paste URL ရဲ့ အကွက်မှာ ချပေးပြီး ညာဘက်အောက်နားက အပြာရောင် အ၀ိုင်းကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
Download Links: 10.2 MB
Ni Multisim 11.0 Full
Maung Pauk at 6:23:00 PM 0
Tun Nay Aung: အစ်ကို mulctism softwareတင်ပေးပါဥိးနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Ni Multisim ဆိုတာ Electric Circuit တွေ ရေးဆွဲရာမှာ လွယ်ကူပြီး သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေ သိပ်သုံးတယ်လို့ပဲ သိထားပါတယ်...
Specialist တွေ သုံးတဲ့ Software မို့ ရှားလည်းရှားပါတယ်.. Multisim က နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းက 12 ဖြစ်ပါတယ်.. ရှာမတွေ့လို့ မတင်ပေးလိုက်နိုင်ပါဘူး... ဗားရှင်း 11 တွေ့လာလို့ လင့်ကိုပဲညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်တွေက 200 MB ကျော်နေတဲ့အတွက် ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ပေးဖို့ အခြေအနေ မပေးလို့ပါ..
Huawei Huawei Rooting Rooting နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 5:56:00 PM 1
One of the God Phone လို့အမည်ပေးထားတဲ့ T8828 ရဲ့ အမှန်တကယ် Root ရပါပြီ ..။
Huawei T8828 ကို One of the God Phone ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက် User တွေအနေနဲ့ Myanmar Font တွေသွင်းမရတာ အခြား Root ရမှ ရတဲ့ Application တွေ သွင်းမရတာကို ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်နေတာကြာပါပြီ ….။
ခုတော့ T8828 ကို အောင်မြင်စွာ Root နိုင်ပါပြီ …။
ပထမဦးဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Driver ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် …။ Driver သွင်းဖို့အတွက်ကို PC suite တွေနဲ့သွင်းထားလိုက်ပါ …။ မရှိရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ...
ပြီးရင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ဇစ်ဖိုင်လေးကိုဖြည်ထားပါ … ။
sd card ကို format ချပေးပြီးတပ်ပေးထားပါ ။
phone ကို battery ဖြုတ်ပြီး 5s လောက်စောင့်ပေးပါ battery ပြန်တပ်ပြီးတော့ Recovery mode ကိုဝင်ပေးပါ …။ Recovery mod ၀င်နေတဲ့အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ကြိုးကိုချိတ်ပါ … ။
MMSD မှ ကိုစိုင်းအာကာရဲ့ ပို့စ်ကို မူရင်းအတိုင်းပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
Hack Tools IP Hider ဆော့ဖ်ဝဲများ
Auto Hide IP 5.3.4.2 Full
Maung Pauk at 5:17:00 PM 1
Auto Hide IP is supplied servers and configure proxy that look as though it really the original.
With Auto Hide IP will enjoyatotally safe and free navigation of intruders seeking to learn or steal our information by illegal means through the original IP connection.
Setup Download Links: 10.8 MB
Audio Softwares Multimedia ဆော့ဖ်ဝဲများ
ဂီတာလက်ကွက် Cord တွေ၊ Bass Tab တွေကို အလိုအလျောက်ပြပေးမယ့် Digital Music Mentor 2.6.0.5 Full
Digital Music Mentor ( DMM ) ဟာ Mp3, Wav, CDA, Wma စတဲ့ Audio တွေကို နားထောင်ရင်း ဂီတာလက်ကွက် Cord တွေ၊ Bass Tab တွေကို အလိုအလျောက်ပြပေးမယ့်အပြင် ဘယ်လိုတီးခတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပါ ပြပေးနိုင်ပါတယ်.. ဂီတနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်နေသူတွေ၊ အပျော်တမ်း ဂီတာ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် အသုံးတည့်မယ့် Software ပါ...
DMM isasoftware that helps you get the Guitar Chords and bass tabs for any pop/rock/country song. DMM even shows you how to play the chords! It is so simple to use.
Full Version လုပ်နည်း
1. DMM ကို Install လုပ်ပါ...
2. Patch မချိုးခင်. Internet နဲ့ Antivirus ကို ခဏ Disable လုပ်ထားပါ...
3. Patch Folder ထဲက ဖိုင်အားလုံးကို C:\_Program Files\_ sienzo \_ dmm \_ အောက်ကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ...
4. Patch 1 ကို ပထမ Run ပါ.. ပြီးမှ Patch2ကို Run ပါ.. ပြီးရင် ချက်ချင်းပဲ Patch 1 နဲ့ Patch2ကို Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ...
5. ဒါဆို အဆင်ပြေပါပြီ.. တကယ်လို့ ကီးတောင်းခဲ့ရင် ကီးဖိုင်ပါပါတယ်... ဒါတွေအားလုံးပြီးမှ Internet နဲ့ Antivirus ကို Enable လုပ်ပါ...
Setup Download Links: 5.66 MB
Maung Pauk at 4:05:00 PM 0
soe : ခိုင်ကျော်ရဲ့ဂီတာတီးခတ်နည်း စာအုပ်လေးတွေလည်းတင်ပေးပါလား..... ဝါသနာပါလို့ပါ ..... ပြီးတော့ထိုင်းမှာနေရလို့ပါ.... စာအုပ်နှင့်စီဒီခွေ မှာဖို့လူကြုံမရှိလိုပါ။....
ကဲ... ခိုင်ကျော်ရဲ့ အဆင့်မြင့် လိဒ် ဂီတာတီးခတ်နည်း စာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. .. ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်၊ ကျင့်၊ ကောင်မလေးတွေအဆောင်ရှေ့မှာ လက်စွမ်းပြ၊ ဟိ. နောက် ရပ်ကွက် တီးဝိုင်းမှာ လက်တည့်စမ်း၊ နောက်တော့ ချစ်စမ်းမောင်တို့လို ဂီတာဆရာတွေ ဖြစ်ပါစေဗျား...
Download Links : 8.45 MB
Maung Pauk at 3:56:00 PM 2
Data Doctor Recovery SIM Card V3 က Sim Card ကနေ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Data တွေကို ပြန်လည် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ပေးမှာပါ...
* Tool Support recovery on windows XP, 2003,XP Media Center2005, Longhorn, Vista, 2000,NT, ME & 98.
* It is Read only & Non- Destructive sim card data recovery utility.
* Software also shows the provider name & ICC identification number of sim card.
Download Links: ( Reuploaded 27.4.2013)
Design စာအုပ်များ e-books Engineering စာအုပ်
ဒီဇိုင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် Google SketchUp အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်
Maung Pauk at 3:39:00 PM 2
ဒီဇိုင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် Google SketchUp အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်တွေ့လာလို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. SetchUp 8.0 ကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာပါ.. ရေးသားသူက U Sann Oo ( MIS- Mandalay) လို့တွေ့ပါတယ်..
အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် မြန်မာကို တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ...
Maung Pauk at 3:30:00 PM 0
၁၉၅၉ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ATM စက် (အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက်) ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပါ တယ်။ ၁၉၆၀ နောင်းပိုင်းကစတင် ရေပန်းစားပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အသုံးပြုနေတဲ့ ATM (Automated teller machine) ရဲ့ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ CPU (အသုံးပြုသူ interface နှင့် ငွေထုတ်စက်အား ထိန်းချုပ်ရန်)
၂။ Magnetic/ Chip card (ငွေထုတ်သူ Customer အား ခွဲခြားဆုံးဖြတ်ရန်)
၃။ PIN/ Touch Screen ( လျို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ်ရိုက်ရန်)
၄။ Display (ဖန်သားမျက်နှာပြင်)
၅။ Function key buttons/ Touch screen ( ထုတ်မည့်ငွေပမာဏအားရိုက်ထည့်ရန်)
၆။ Vault (ငွေများအားထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် မီးခံသေတ္တာအလွှာ)
၇။ Housing (စက်အခွံ)
စက်ကို interbank network နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပါတယ်။ ယင်း ဘဏ်ကသီးသန့်အသုံးပြုတဲ့ သီးခြား အတွင်း Network မို့လို့ သူ့ကို interbank network လို့ခေါ်ပါတယ်။ ယင်းဟာ ဘဏ်အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘဏ်အများအပြားကို Network တစ်ခုတည်းအသုံးပြုတာမျိုး လည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုရင် ဘဏ် ၁၉ခုလောက်ဟာ Megalink ကပေးတဲ့ Network ကို အသုံးပြုပါတယ်။
ပြီးတော့ စက်ကို host နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ADSL (သို့မဟုတ်) dail-up modern (သို့မဟုတ်) leased line တို့နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ရပါသေးတယ်။ ADSL ကတော့ ကော့ပါးတယ်လီဖုန်းလိုင်းဖြစ်ပြီး Data ပို့လွတ်မှုမြန်ဆန်မှုရှိပါတယ်။ dail-up modern ဆိုတာကတော့ ရိုးရိုးတန်းတန်း တယ်လီဖုန်းလိုင်းလိုဖြစ်ပါတယ်။ Leased line မှာ POTS လို့ခေါ်တဲ့ လိုင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။ POTS ဆိုတာ Plain old telephone service ဖြစ်ပြီး Data အပို့၊အလွတ် အင်မတန်ရိုးဆင်းလွယ်ကူပါတယ်။
ပြီးတော့ လိုင်းဆွဲအားကောင်းတဲ့ အင်တာနက်လိုင်း ( VPN connection) လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ATM စက်ရဲ့ Network ကိုနေရာတစ်ခုကနေ အခြားမြို့နယ်က စက်ဆီကို ကူးနိုင်ဖို့ အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြုရပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ lower-level layer communication protocols ကတော့ SDLC, TC500, Async, X.25, TCP/IP တို့ဖြစ်ပါတယ်။
စက်အလုပ်လုပ်ပုံအကျဉ်းချုပ်ကတော့ ကဒ်ကို ထဲလိုက်တဲ့အခါမှ reader ကဖတ်ပြီး ရလာတဲ့ Data ကို Administrator ဆီ interbank Network ကနေပို့လွတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ user ကထုတ်မည့်ငွေပမာဏကို တွက်ချက်ပြီး Cash Dispenser ကနေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြီး ထုတ်ယူတဲ့ ငွေပမာဏကို user အားသိစေရန် အသိအမှတ်ပြုစာရွက် (ဘောင်ချာ) ပြန်ပေးပါတယ်။
လုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်ပါတယ်။ ဥပမာ လျှို့ဝှက်နံပါတ် မှားရိုက်မှုအကြိမ်အရေအတွက် များလာရင် မှတ်သားပြီး user ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ဘာမှတုန့်ပြန်မှုမပေးတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ အခြား Security function ပါဝင်ပါသေးတယ်။
သို့ပေမဲ့ အားနည်းချက်များလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ-မီးပျက်လို့မရပါဘူး။ မီးပျက်ရင် (Electrical suppy shut down/ off) ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခက်တွေ့ပါပြီ။ မီးယာယီပျက်ပြီး ပြန်လာရင်လည်း စက်ကို ပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်ပို့သေချာစစ်ဆေးပေးရပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် မမျော်လင့်ပဲ မီးပျက်တဲ့အခါ အခွင့်ကောင်းစောင့်တဲ့ hacker များဟာ ATM စက်ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Hack ပြီးငွေခိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ CCTV ကင်မရာထားသော်ငြားလည်း ယနေ့အထိ အားနည်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ATM Card အစား အခြား ဗိုင်းရက်စ်ပါတဲ့ Malware card များအသုံးပြုပြီးထုတ်ယူသူများလည်းရှိတယ်လို့ လေ့လာဖူးပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း လုံခြုံရေးအားသာချက်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ ATM စက်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Source : လမင်းအောင် (သုတစွယ်စုံ)
Design စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲများ
Edraw Max Professional 7.0.0.2431 Full
Maung Pauk at 8:01:00 PM 2
Edraw Max ဆိုတာ flowcharts, organizational charts, business, HR diagrams, work flows, software diagrams, UML diagrams, maps နဲ့ network diagrams တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူရေဆွဲနိုင်တဲ့ diagramming software ပါ.. Vactors Graphic နဲ့ရေးဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိပ် ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်... Design သမားတွေ၊ မြေပုံရေးဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့ သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ Software လည်းဖြစ်ပါတယ်...
· EDraw isadiagramming software based on vectors, which quickly creates flowcharts, organizational charts and network charts
· Support basic flowcharts, organizational charts, business, HR diagrams, work flows, software diagrams, UML diagrams, maps and network diagrams
· Drawing tools powerful and easy to use and many predesigned library objects, drawing does not have to start again. Just drag the ready-made shapes from the toolbar and place them on your site. Drawing could not be easier
· What you see is what you get. Zooming, scrolling, multi selection and multi-level undo / redo supported. Does not require any artistic skill. Automatically aligns and arranges everything to look great
· Many form templates. Offers more than 2000 shapes in common use
· Supports the gallery. Giveawarehouse templates to collect, manage various kinds of works of excellence
· Distinct colors, fonts, shapes, styles, pictures, text and symbol for each object of the diagram are available
· Supports common graphic format and print mode which you see is what you get
· Easily view complex information withawide range of EDraw diagrams. Make those diagrams even smarter and more useful by linking them to underlying data, which providesamore complete picture of the system or process.
Setup Download Links: 38 MB
Condensed of Composition (ဝါကျဖွဲ့ထုံး အနှစ်ချုပ်) အပိုင်း - ၁
Maung Pauk at 5:29:00 PM 0
ယခု တင်ပြမည့် အကြောင်းအရာသည် စာရေးသူ၏ ကျေးဇူးရှင် ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင် ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော စာဖတ်နည်း အနှစ်ချုပ်ကို စာရေးသူ မှ တဆင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခု တင်ပြမည့် စာစုသည် Grammar မဟုတ်ပါ၊ Grammar တွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို ရှင်းပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် စာတတ်ပြီးသော ပညာရှင်များအတွက်လည်း မရည်ရွယ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်လိုသော်လည်း မည်ကဲ့သို့ နားလည်ရမည် မသိသောသူများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
1. Five Basic Sentences (အခြေခံဝါကျ ၅ မျိုး)
အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများ အနေဖြင့် ပထမဦးစွာ အောက်ပါ အခြေခံဝါကျ ၅ မျိုးကို နားလည်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
1) S + V S = Subject
2) S + V + C V = Verb
3) S + V + O C = Complement
4) S + V + I.O + D.O I.O = Indirect Object
5) S + V + O + C D.O = Direct Object
ပုံစံ (၁) S + V
ဖော်ပြပါ ဝါကျများသည် S, V နှစ်ခုတည်းရှိရုံဖြင့် အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံသော ဝါကျများ ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်းဆိုသည်မှာ နားလည်ခြင်း၊ နားမလည်ခြင်း ကို ဆိုလိုပါသည်။ တဖက်သား ပြောသည့်စကားကို နားလည်လျှင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသည် ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် မိမိပြောသော စကားပြည့်စုံလျှင် တစ်ဖက်သာ နားလည်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံသော စာကြောင်း တစ်ကြောင်းကို ဝါကျဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ပုံစံ (၂) S + V + C
He isastudent. (n)
He is clever. (adj)
He is here. (adv)
He is in the garden. (phrase)
အထက်ပါ ဝါကျများတွင် S, V နှစ်ခုတည်းဖြင့် အဓိပ္ပာယ် မပြည့်စုံသောကြောင့် (ဝါ) နားမလည်သောကြောင့် ထပ်မံဖြည့်ပေး ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ထပ်မံဖြည့်ပေးရသော အရာကို အဖြည့်ပုဒ် (complement) ဟု ခေါ်ပါသည်။ ထိုအဖြည့်ပုဒ် (complement) နေရာတွင် အထက်ပါ ဥပမာ ဝါကျများအရ (၄)မျိုးရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ _
1) Noun (student)
2) Adjective (clever)
3) Adverb (here)
4) Phrase (in the garden)
ပုံစံ (၃) S + V + O
He killsamouse.
ဖော်ပြပါ ဥပမာ ဝါကျတွင် S, V နှစ်ခုတည်းဖြင့် မပြည့်စုံသောကြောင့် ထပ်မံဖြည့် ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခု ဝါကျတွင် ထပ်မံဖြည့်ပေးရသေ စကားလုံးသည် “အဖြည့်ပုဒ်” (complement) မဟုတ်ဘဲ “ကံပုဒ်” (object) ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် He is ဟူသော S နှင့် V နှစ်ခုတည်းဖြင့် မပြည့်စုံသောအခါ ထပ်ဖြည့်ပေးရသောastudent သည် V ဖြစ်သော is ၏ ပြုလုပ်ခြင်းကို မခံရပါ။ ပုံစံ (၃) ဥပမာ ဝါကျဖြစ်သော He kills ဟူသော S နှင့် V တွင် သူသည် သတ်သည် ဆိုရုံမျှဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသည့်အပြင် သတ်သည်ဟူသော V ကြောင့် သတ်ခြင်းကို ခံရသော “ကံပုဒ်” (object) ဖြစ်သွားပါသည်။ အလွယ်ဆုံး မှတ်သားလျှင် V တစ်ခုတွေ့လျှင် မြန်မာလို “ဘာကို” ဟု ဘာသာပြန် ကြည့်ပါ။ ဥပမာ – He beats သူသည် ရိုက်သည် “ဘာကို” ရိုက်တာလဲ ? He knows သူသည် သိသည် “ဘာကို” သိတာလဲ ? He eats သူသည် စားသည် “ဘာကို” စားတာလဲ ? ဖော်ပြပါ ဥပမာများအရ “ကံပုဒ်” (object) လိုပါသည်။
ပုံစံ (၄) S + V + I.O + D.O
အဆိုပါဝါကျတွင် “ဘာကို” ဟူသည့် ကံပုဒ် (object) အပြင် “ဘယ်သူ့ကို” ဟူသော ကံပုဒ် (object) တစ်ခု ထပ်မံဖြည့်ပေးရန်လိုပါသည်။ me နှင့်abook ကံပုဒ် (object) နှစ်ခုအနက်abook သည် ပြုလုပ်သူ (subject) နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ ရသောကြောင့် D.O ဖြစ်ပြီး me သည် တဆင့်ခံ ထိတွေ့ရသောကြောင့် I.O ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပြုလုပ်သူ (subject) He သည်abook ကို ဦးစွာထိတွေ့ရမည် ဖြစ်ပြီး ပေးသည့်အချိန်မှသာ me ကို ထိတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရမည့် အချက်တစ်ခုမှာ He givesabook to Mg Hla. ဟူသော ဝါကျတွင် Mg Hla သည် ကိုယ်ပိုင်နာမ်(proper noun) ဖြစ်သောကြောင့် I.O(Indirect Object) ကို V နှင့် ကပ်ထား၍ မရသည်ကို မှတ်သား ရပါမည်။ [မှတ်ချက်။ ။ သက်မဲ့ (non-living things) များသည် D.O (Direct Object) များဖြစ်ပြီး သက်ရှိ (living things) များသည် I.O(Indirect Object) များဖြစ်သည်။]
ပုံစံ (၅) S + V + O + C
ကျွန်တော်တို့ကို နေက နွေးထွေးစေသည်။
He gets himself ready.
သူက သူ့ဘာသာသူ အသင့်ပြင်သည်။
He found his box empty.
သူ့သေတ္တာ ဘာမျှမရှိတာ သူတွေ့ပြီ။
Government sets the prisoners free.
အကျဉ်းသားများကို အစိုးရက လွှတ်လိုက်ပြီ။
တံခါးကို သူ တွန်းဖွင့်လိုက်သည်။
He painted the door green.
တံခါးကို သူ အစိမ်းရောင် သုတ်သည်။
(အထူးသတိထားရမည့် အချက်မှာ ဘာသာပြန်သည့်အခါ နောက်ဆုံးမှ စကာ ဘာသာပြန်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။)
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အခြေခံဝါကျ ၅ မျိုးသည် မည်သည့် အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တွင်မဆို အမြဲတမ်းတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ အခြေခံဝါကျ ၅ မျိုးလုံးတွင် V တစ်ခုတည်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ V တစ်ခုတည်းပါသော ဝါကျမျိုးကို Simple Sentence ဟုခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေခံဝါကျ ၅ မျိုးအနက် “ပုံစံ (၅)” ဝါကျအမျိုးအစားသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နောင်တွင် ထပ်တွေ့ရမည့် Compound/ Complex Sentences များနှင့် မရောထွေးစေရန် သေသေချာချာ လေ့လာ လေ့ကျင့်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
(ဆရာကြီး ဦးမြကြိုင်ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချမှုကို အောက်ပါ link တွင် ကြည့်ရှုဆည်းပူးနိုင်ပါသည်။)
Credit to : Aung Ko U English Language Class
Pyae Phyo (MMiTD) at 10:33:00 AM 0
e-books General Books
ကုမ္ပဏီ Interview စာအုပ်
Maung Pauk at 6:29:00 PM 2
ဒီခေတ်ကာလမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါများလာပေမယ့် တကယ့်အရည်အချင်းရှိသူတွေလည်း အလုပ်မရသူတွေ အများကြီးပါ.. လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ကြပေမယ့် ကုမ္ပဏီတွေမှာ အင်တာဗျူးသွားဖြေတဲ့အခါ မအောင်ကြတာတွေလည်း ဒုနှင့်ဒေးပါ... ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေများ အလုပ်အကိုင် လျှောက်ရာမှာ အင်တာဗျူးအတွက် ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ပါ...
မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်)ကရေးထားတာပါ... လိုချင်ရင် ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ..
Maung Pauk at 6:10:00 PM 2
သတိပြုရန် – 450Mhz hendset အတွင်း ထည့်သွင်း မသုံးမိစေရန်။
ပထမဦးစွာ ကဒ်ချိုးပြီး 800Mhz ဟန်းဆက်အတွင်းထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လိုင်းပေါ်လာအောင် စောင့်ပါ။ လိုင်းတက်လာပြီဆိုလျှင် မိမိနီးစပ်ရာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ခေါ်လိုက်ပါ။ လိုင်းမဝင်သော တီတီတီ အသံကြားလျှင် ပြန်ချလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ခေါ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်ချထားလိုက်ပြီး ခေတ္တစောင့်လိုက်ပါ။
003456 မှ အောက်ပါအတိုင်း Message ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
ဖုန်းအတွင်း ပါဝင်သော ၃၀၀ကျပ်မကုန်မီ ၅၀၀၀တန် ငွေဖြည့်ကဒ်ကို ထည့်သွင်း ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ရန် code မှာ
ဖြစ်သည်။ ငွေလက်ကျန် မေးရန်မှာ
အဆိုပါ ၁၅၀၀တန် ဆင်းကဒ် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်းမန်နေဂျာရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု ကြေညာထားပါသည်။အဝင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၄ကျပ်ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး မကြာမီကာလတွင် အင်တာနက်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
Credit : လင်းယံခ (မြန်မာစာ) & myawady facebook
Maung Pauk at 6:02:00 PM 0
Windows 8 Performance ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်သင့်သော နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 5:54:00 PM 0
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူအားရဲ့ ၉၀% လောက်ဟာ Windows Operating System ကို အသုံးပြုကြပါတယ်... ခေတ်နှင့်အညီလိုက်နိုင်ဖို့ သုံးနေတဲ့ Windows တွေကို ခေတ်ပေါ် ဗားရှင်းတွေ အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး သုံးစွဲကြတာလည်း များပါတယ်.. ခုဆိုနောက်ဆုံးပေါ် Windows 8 ကိုသုံးစွဲနေကြပါပြီ.. ကျွန်တော် မောင်ပေါက်ကတော့ Windows XP Services Park2မှာပဲ တစ်ဝဲလည်လည် ဖြစ်နေတုန်းပဲခင်ဗျ.. ဒါကလည်း အခြေအနေတစ်ခု အရပါ... တကယ်ဆို အနိမ့်ဆုံး Windows XP Services Park3ကိုသုံးစွဲသင့်နေပါပြီ.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ Softwares တွေဟာ Windows XP Services Park3လောက်ကိုပဲ Compatible ဖြစ်အောင် ထွက်လာလို့ပါပဲ...
နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Windows 8 ဟာ ကျွန်တော်တို့ User တွေနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေသေးဘူး.. ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ License နဲ့ဝယ်သုံးတဲ့ ၀င်းဒိုးဆိုတာ 0.1% တောင်ရှိမယ်မထင်ဘူး.. အားလုံး Pirate တွေချည်းပဲ.. ဒါ့အပြင် ကိုယ် သုံးမယ့် Operating System, Software တွေနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Hardwares တွေ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ဆိုတာကို သိပ်အလေးမထားကြတော့ သုံးရတာ error တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး တွေ့နေရတာပါပဲ..
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ ၊ လေ့လာ ချက်များအရ Windows 8 Performance ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်သင့်သော နည်းလမ်းများ ကို အကြံပြု ဆွေးနွေးလိုပါတယ်...
Windows တစ်ခု တင်တော့မယ်.. Softwares တစ်ခု Install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး Hardware Requirement/ System Requirements ကို အရင်သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Windows 8 အတွက် Hardware Requirement ကတော့-
ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါ Microsoft က တရားဝင် ကြေငြာထားတာပါ.. တကယ်လို့များ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက
CPU 800 MHz, RAM 512, Hard Disk Space 10 GB ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်..
အဆင့်(၁)မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ Hardware လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီလို့ Windows 8 ကို Install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် System မှာ နည်းနည်း ပြင်ကြရအောင်.
PC ကို Refresh လုပ်ခြင်း
ကီးဘုတ်ပေါ်က Windows Key နဲ့ C ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ..
General ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်ပြီးRefresh your PC without affecting your files ဆိုတာကိုရှာပါ.. အဲဒီမှာ Get Start ဆိုတဲ့ Button ကို နှိပ်လိုက်ပါ..
Ready to refresh your PC ဆိုတာပေါ်လာရင် Refresh ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ကွန်ပျူတာက Restart ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်.. နညးနည်းတော့ ကြာနိုင်ပါတယ်... မလုပ်တတ်ရင် ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ...
Searching Feature ကို Turn Off လုပ်ခြင်း
My Computer ကို Right Click ထောက်ပြီး Manage ကိုနှိပ်ပါ
Computer Management အောက်က Services and Applications ကိုနှိပ်ပါ
Services and Applications ကိုထပ်ပြီး Double Click ခေါက်လိုက်ပါ...
Services Button ကိုနှိပ်ပြီး Stop ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
မလိုအပ်တဲ့ Visual Graphics Effects တွေကို Turn Off လုပ်ခြင်း
My Computer ကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ..
Advanced system settings ကိုနှိပ်ပါ..
Advanced ကိုနှိပ်ပြီး Settings ကိုနှိပ်ပါ
Box တစ်ခုထွက်လာတဲ့အခါ နောက်ဆုံး (၄)ခုကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာ အမှန်ခြစ်တွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ..
မလိုအပ်တဲ့ Programs နဲ့ Applications တွေကို Disable လုပ်ခြင်း
Start Button ကိုနှိပ်ပြီး Control Panel ကိုနှိပ်ပါ...
Programs and features ကိုနှိပ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ Program တွေကိုရွေးပြီး အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ...
Laptop တွေမှာ Battery Plan ကို ချိန်ညှိခြင်း
ညာဘက်အောက်ထောင့်နားက Battery Icon လေးကိုနှိပ်ပြီး More Performance ကိုနှိပ်ပါ...
High Performance ကိုနှိပ်ပြီး လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပါ....
Softwares များကို အသုံးပြုခြင်း
CCleaner လို Cleaner ဆော့ဖ်ဝဲတစ်မျိုးမျိုးသုံးပါ..
TuneUp Utilities, Glary Utilities, Advance System Care လိုမျိုး Utilities တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါ... လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..
Antivirus ကိုသုံးရင် System နဲ့ မတည့်တဲ့ဟာမျိုးကိုရှောင်ပါ. နှစ်မျိုးသုံးမျိုး မသုံးပါနှင့် ... တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ Update လုပ်ပြီးသုံးပါ....
ဒါဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Windows 8 သုံးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာလေးဟာ သွက်လက်မြန်ဆန်ပြီး error ကင်းကင်းနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ခိုင်းသမျကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်ပေပါလိမ့်မယ်...
ကျွမ်းကျင်သူများအနေနဲ့ Comment မှာ လိုအပ်ချက်တွေကို ထပ်မံဖြည့်စွက်အကြံပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်....
Internet Tools Security Tools
Pyae Phyo (MMiTD) at 5:35:00 PM 0
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ အတွက်သင့်တော်မယ့် Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မရှိမ
ဖြစ်တော့မဟုတ်ပေမယ့် ဒါမျိုး Software ကနည်းနည်းလေးရှားလို့ တွေ့တုန်းလေးယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ
Internet Connection ကို Password ပေးပြီး Lock ချထားလို့ရပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် ၀င်မကြည့်စေချင်တဲ့
Website တွေကိုလည်း ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ Internet Explorer, Firefox, Google Chrome အပြင်အခြား
သော Browser တော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Internet ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဌာန
ဆိုင်ရာတွေ Company တွေမှာ ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာရှင်း
[list]Password protect internet access.
Prevent users or groups from accessing internet.[/list]
[list]Web browsers: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome and so on.
Pyae Phyo (MMiTD) at 10:36:00 AM 0
Network သမားများဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Network Security
Auditor လို့ခေါ်တဲ့ Security ပိုင်းကို ဦးစားပေးထားတဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်
အောင် Patch ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာကိုအခုမှစပြီးလေ့လာနေသူများ အသုံးပြုလို့အ
ဆင်ပြေမယ့် Software တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Network Security Auditor isanetwork security and vulnerability scanner that allows auditing and monitoring network computers for possible vulnerabilities, checking network for all potential methods thatahacker might use to attack it and createareport of potential problems that were found. Nsauditor isacomplete networking software package that includes more than 45 network tools and utilities for network auditing, scanning,network connections monitoring and more.
Myanmar IT Helper at 10:11:00 PM 3
ကွန်ပျူတာအတွင်းကမလိုအပ်တဲ့ Softwares တွေကို Registry ထဲမှာပါ အစအနမကျန်အောင် စနစ်တကျ
ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး Software လေးဖြစ်ပါတယ်..ကွန်ပျူတာ Services ဆိုင်များ တော်တော်
အသုံးပြုကြပါတယ်..လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်မျာ..
DownloadSetup=>Link 1 / Link 2
DownloadCrack=>Link 1 / Link2
Revo Uninstaller really helps to uninstall software and also take out undesired plans put in using your laptop in case you possess problems uninstalling and also cannot uninstall these individuals from "Windows Create or perhaps Get rid of Programs" management cell applet. Encoding with regard to areas right after uninstall -- Featuringasuperior and also rapid criteria, Revo Uninstaller assesses an application's facts just before uninstall and also scans after you uninstall an application. After the program's frequent uninstaller runs, you can take out extra unneeded documents, files and also registry tips that are typically left over using your laptop.
i) Real Time installation monitor
ii) Logs database
iii) Forced Uninstall
iv) Quick or Multiple uninstall
v) Advanced scanning for leftovers
vi) Manage Installation logs
vii) Multi-level Backup System
viii) Junk files cleaner
ix) Autorun Manager
x) Windows Tools and Browser cleaner
xi) MS office Cleaner
xii) Windows cleaner and evidence remover
xiii) Unrecoverable delete
i) Download and Run the Software....
ii) Install the setup...
iii) After Completing Don't Run the software..
iv) Now Copy the Keygen file and Paste it in here:
v) Than Run the Patch and Click on "Patch" button...
For patching Input Your name and click ok..
vi) Now copy and paste the crack in to this directory..
vii) Done and Enjoy